Qaabka loo hurdo iyo dabeecada qofka
» Qaabka loo hurdo iyo dabeecada qofka
Qubaro ku xeel dheer luqada jirka ayaa sheegay in qaabka uu qofka u jiifto laga garan karo dabeecada shaqsiyadiisa .
Qaabka uu qofka u jiifto ayaa si weyn loogu garan karaa dabeecada shaqsiyadiisa , hadaba aqriste si wacan ula soco kana eego dabeecada shaqsiyadaada .
 1-Qaabka Uuka Jiifka: %51 Haweenka ayaa door bida in ay qabkaasi u jiiftaan ,qaabkaan waa in madax iyo lugaha la isu keeno iyadoo gacmaha labada canjar la dhex gilinayo Ogaaw dadkaasi dhanka Xishoodka iyo dareenka ayay u jan-jeeraan .
 2- Qaabka Askariga:Waa kuwa sida tooska dhabarkooda ugu jiifta , labadooda gacmood ku dhirarsan yihiin jirkooda Ogaaw kuwaasi deganaan iyo is ilaalin ayay u jan-jeeraan .
Qaabka Geedka: Waa in hal dhinac qofka u seexdo hal gacan iyo lugna uu ku jiifo Ogaaw qofkaasi waa bulsho ayna fududahay in lala tacaamulo.
 4- Qofka u seexda hal dhinac laakiin labada gacan kor u qaada ,Ogaaw qofkaasi waa Shaki badan yahay .
 5-Calosha oo lagu jiifto: Caloosha oo lagu jiifto iyadoo labada gacan-na la dhigayo madaxa aktiisa isla markana dada yar ay adeegsadaan %5.6 Ogaaw dadkaasi wel -wel iyo fikir aayaha dambe iyo cabsi ayay u u janjeeran sidoo kale hab la dhaqankiisa dadka kale ma fiicna .
 Qofka aan kala jecleyn jawiga iyo qolka uu jiifanayo iskana jiifta meeshii uu doono isla markaana qaylada iyo shanqarata kala jecleyn Ogaaw qofkasi waxa u jan-jeera deganaasho la`an waxa uuna ka baqaa kalinimada , waxa uuna jecel yahay in Radio ama TV- ga uu ku dhafro.
 6-Jiifka Xidiga Badda: Waa kuwa ku jiifta dhabarka xabadkooda kor uu u soo jeedo isal markaana labada lugood iyo gacmaha kala fogeeya midba meel u jeediya sida sawirkaan ka muuqata Ogaaw kuwaasi waa dadka jecel in dadka kale dhageystaan ixtraaamkoodana badan yahay .
Sidoo kale qofka meel degan iyo mugdi ku seexdana waxa uu dareema deganaasho nafsiyan ah waana qof bulsho ah saqo badan .
 Qofka labada dhinac midig iyo bidix u seexda , Ogaaw waa qof isu dheeli tiran nafsiyan iyo mid bulsho leh noloshiisana si toos ayuu isha uga ridaa waqtigooda waxa ay ku dameeyaan howl wax ku ool ah waa dad Run badan .
 Qofka aan seexan karin in mid ka mid ah lugihiisa u Ruxo mooyee ama isku garaacin Ogaaw qofkaasi waa xasaasiyad badan isu ma dheeli tirna , wa qof hadal badan , wax aan loo jogin ka fikira iyo mustqabal fog , xirirka dadka kala dhaxeeyana ma fiicna.
 Qofka aan barkinta ku seexan iska ka tuura Ogaaw wa qof shaqsiyadiisa is bedel badan tahay , ma naxa ah , la tacaamulkasi adag yahay kibirloow ah .
 Qofka ku jiifta dhabarkiisa xabadkiisana sareeyo balse gacmihiisa madaxisa ka dambeeyaan oo ay ku duuban yihiin Ogaaw qofkaasi waxa uu jecel yahay wax barashada si waali ah , waxa uu leeyahay afkaar yaab badan macquulna aheyn mararka qaar laakiin dhibka qofkasi haysta waxaa waaye lama xariiro qofka munaasabka ku ah .
12] Qofka u seexda hal dhinca dhinacyadiisa dhan isku duuban yihiin sida sawirka ka muuqata Ogaw qofkasi waa maseer badan yahay inkastoo qalbi wax jecel uu leeyahay waxaa ka xoog badan ka soo hor marta doqnimada .
 Qofka dhinac dhinac u jiifta mid ka mid ah jilbihiisna kor u qaada Ogaaw qofkaas waa qof mashquul badan wax cajabiyana ma jiran wax waliba wuu naqdiyaa, waa qof xir xiran kacsan mar waliba wax aan laga xanaaqin ayuu ka carodaa.
 Qofka madax ilaa lugaha iska daboola Ogaaw qofkas waa qof qariya sirtiisa xitaa haddii dhib badan u haysto , intii qof caawin weydiisan lahaa dhibka in uu ku jiro ayuu jecel yahay.
Aqriste fikirkaada waa muhiim , dabcan sir culus
ayay alcarabiya ku siisay.